Shiinaha oo noqday halista ugu weyn ee dhuunta u gashay Maraykanka | Berberanews.com
Home WARARKA Shiinaha oo noqday halista ugu weyn ee dhuunta u gashay Maraykanka
Washington-(Berberanews)-Sarkaalka ugu sareeya sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in Shiinaha uu yahay “halista ugu weyn ee dimuqraadiyadda iyo xorriyadda” tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka.
Isaga oo warbixin ku qoray joornaalka Wall St Journal, John Ratcliffe waxa uu sheegay in Shiinuhu uu ku sii kordhayo awooddiisa xatooyo siraha Mareykanka ka dibna lagu beddelayo shirkadaha Mareykanka ee suuqa ku jira.
Maamulka Trump ayaa mowqif adag ka istaagay Shiinaha, isagoo cashuuro ku soo rogay badeecooyinka Shiinaha, kuna eedeeyay Beijing xatooyada hantida aqooneed.
Shiinaha ayaan wali ka jawaabin. Si kastaba ha noqotee, waxay si xoog leh uga jawaabtay dhaqdhaqaaqyada Mareykanka sida soo rogitaanka canshuuraha iyo dadaalka lagag joojinayo shirkadda weyn ee isgaashsiinta ee Huawei suuqa Mareykanka.
“Beijing waxay isu diyaarineysay iska horkeenka Mareykanka oo ay damacsaneyd inay adduunka ku maamusho “dhaqaale ahaan, militari ahaan iyo teknolojiyad ahaanba”, ayuu yidhi Ratcliffe.
Agaasimaha Sirdoonka Qaranka ayaa sheegay in Shiinaha uu badalay Ruushka iyo la dagaalanka argagixisada oo ah meelaha ugu weyn ee diirada la saaray howlaha sirdoonka Mareykanka.
Shiinuhu wuxuu ku hawlanaa qaab basaasnimo dhaqaale oo uu ku tilmaamay “dhac, soocelin iyo bedel” – isagoo tusaale u soo qaatay shirkad marawaxadaha dabaysha Shiineeska ah oo lagu helay dambiga Mareykanka ee ah inay wax ka xaday tartame Mareykan ah ka hor intaanay u gudbin adduunka oo dhan.
Shirkadda Mareykanka ayaa lumisay qiimaha saamileyda waxayna eriday shaqaale.
Hantida aqooneed ee Mareykanka oo qiimaheeda gaashayo $ 500bn (£ 370bn) ayaa la xadaayay sanad walba, ayuu yidhi. Xadhiga FBI-da ee muwaadiniinta Shiinaha ee xatooyada cilmi baadhista ayaa noqotay mid soo noqnoqota Shiinaha ayaa sidoo kale bixinayay madaxa waaxda kimistariga ee jaamacada Harvard $ 50,000 bishii ka hor xadhigiisa horaantii sanadkan.
Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale arrimahani yimaadeen wakhti Shiinaha uu kordhiyay cadaadiska uu ku hayo xulafada Mareykanka ee Australia, isagoo daabacay liistada qaababka ay u rabto Canberra inay wax ka bedesho dhaqankeeda, inay canshuuro ku soo rogto soo dajinta khamriga Australia ayna ka cadheysiiso dowladda Australia.
Dagaalka maraykanka iyo shiinaha
ee dhuunta u gashay Maraykanka
Ganacsiga maraykanka iyo China
Shiinaha oo noqday halista ugu weyn
Xiisada shiinaha iyo maraykanka
Previous articleGacantaada ha ku dhaxal-wareejin dhulkaaga hooyo
Next articleIran oo diiday shuruudaha Biden ee soo nooleynta heshiiskii nukliyeerka